Mushure mekuvandudza nzvimbo yangu yekuita Windows 10 Insider Preview kuvaka 17046 yangu Outlook 2013 yakamira kushanda. Kunyanya, Outlook yakanga isingakwanisi kutumira ma-mail, Tumira / Gamuchira All Folders, kana kuti utange Zvigadziro zveAkaunti. Outlook ichaita kuti shoko risina kukanganisa riiti "Haisati raitwa" pasina ruzivo rwakawedzerwa rwakapiwa. Iko kusakanganiswa ndeyekukanganisa kweshoko rinokurumidza kunobvunzawo kuti "Izvi zvaibatsira here?"
Tumira / Gamuchira Zvose Folders zvinokonzera Hazviiti.
Iri mutungamiri richakubatsira kuti uongorore nekugadzirisa Microsoft Outlook inoratidza "kusati yashandiswa" kukanganisa.
Tarisa dzimwe Hurongwa hweHurumende
Kana iwe une nyaya ne Microsoft Outlook pakarepo mushure mekuvandudza zvakakosha kuti uone kana mamwe mahofisi eHofisi ari kushanda kana kwete. Edza kutanga Shoko, PowerPoint kana Excel kuona kana iyo mapurogiramu inomhanya isina chero kukanganisa, chekutanga chekuona kushaikwa kwehofisi yeisensi ichiri kushanda. Mune mhaka yangu, pandinoedza kutanga mamwe mahofisi emahofisi eMicrosoft, iyo yakaratidzawo maitiro asina kunaka. Kana izvi zvikaitika kwauri, edza kugadzirisa kana kudzorera Microsoft Office.
Kugadzirisa, enda Settings > Zvirongwa & maficha > tsvaga Microsoft Office (yako version) Professional Plus 2013. Sarudza chinhu uye chengeta "Shandura"
Izvi zvichaita kuti installer iitange, sarudza Kugadzirisa uye Rambai kupedza.
Edzazve Kudhinda Outlook.OST file
Pane nzira dzakasiyana dzekudzorerazve faira yako ye Outlook OST. Dambudziko rakaipa uye nyaya yakanyanyisa ndeyokuita kuchengetedza uye kubvisa faira iripo. Iwe unogona kuwana faira yako yeOST pasi pe nzira iri pasi apa.
Chikonzero chandinokurudzira iyi nzira ndeyokuti kazhinji nguva dzisina nzira yekudzokorora kuburikidza neUI apo Outlook haiti kupindura kana muhuori. Tichifunga kuti uri kushandisa shanduro uye IMAP, maziso ose anonyorwawo pavhavha saka nokubvisa faira yeOST haungarasikirwi ma-mail. Izvo zvamucharasikirwa ndezvimwe mitemo yemunharaunda, kana kuti mahwendefa awakamboita kubvira. Pasi pane muenzaniso apo ini handikwanise kuwana "Account Settings", zvisingarevi kutanga kugadzirisa zvinhu mukati meAptlook.
Iwe uchawana zvikanganiso sezvizvi:
Takacherechedza kuti hutano huripo huripo hunogona kutengesa zvimwe uye purogiramu iyi yeHofisi inogona kuwanikwa muIndaneti. Iwe unogona kuda:
Tonga kana chengetera network network uye tendera mhepo yeAplane kuti iende kusina kubuda
Unganidza kune Wi-Fi kana kuti network yeLAN isiri iyo yakaiswa
Chengetedza chimiro cherongwa rako re data nefoni yako
Ramba Uchifambira Mberi
Bhokisi rako remaikmail ikozvino rakanyatsogadziriswa sechikamu chekuvandudza kuAptlook 2013. Iyi imwe nguva yekutora inogona kutora maminetsi e-15 uye kushanda kunogona kuchinjwa apo kugadziridza kuri kuitika.
Hapana chemashoko aya ari pamusoro apa anobatsira kuziva kuti chii chaiitika kana kuti havana kupa mazano ekugadzirisa nyaya yacho. Saka kana izvi zvikaitika kwauri, edza imwe yemazano maviri pamusoro uye netariro, yako Outlook ichadzoka uye inoshanda sechinyakare zvakare.
Kanganiso 0x80070057 Outlook Offline Kero Book haitore
Iwe hauzokwanisi kugamuchira tsamba kubva kuOutlook yezvino bhokisi retsamba
Chengetai Kana Office Yenyu 2016 Kana 2013 Chigadzirwa Chezvinhu Chinofanira
Filed Under: errore maonero asingaite